म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट - यो म्याग्नेसियम नुन एसिड कोइला। यो बेरंग क्रिस्टल को रूप लिन्छ। जडान निम्न प्रकार मा विभाजित छ:
- म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट;
- म्याग्नेसियम बिकारबोनिट।
एक पदार्थ मैग्नेसाइट (खनिज) को रूपमा व्यापक प्रयोगमा प्रकृति भेटिए। यसलाई चिकित्सा मा, खाद्य उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक, म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट सामाग्री इन्सुलेट को उत्पादन को लागि रबर मिश्रण थपिएको छ। पदार्थ एक दबाइ रूपमा मानिन्छ भने, यो यसको astringent, विरोधी-भडकाऊ, spasmolytic प्रभाव उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट मानिसहरूलाई मा म्याग्नेसियम कमी भरिन्छ। पदार्थ पनि microelements संग Multivitamin तयारी मा समावेश गरिएको छ।
म्याग्नेसियम तयारी बुझाउँछ छ antacid एजेन्ट। यो फारम गर्न गैस्ट्रिक एसिड संग अन्तरक्रिया renders म्याग्नेसियम क्लोराइड छ घुलनशील र कार्बन डाइअक्साइड। दबाइ को एक सानो रकम धीरे जठरांत्रिय पर्चा देखि अवशोषित हुन्छ। दबाइ मध्यम रेचक औषधि प्रभाव छ।
म्याग्नेसियम normalizing सक्षम छ र चयापचय सक्रिय। यो एक नियामक स्थानान्तरण प्रक्रिया, भण्डारण र ऊर्जा उपयोग, प्रोटिन संश्लेषण नियामक र nucleic एसिड, पेशी ईओण ब्यालेन्स छ।
म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट लागि संकेत छ:
- गैस्ट्रिक रस को अम्लता वृद्धि;
- मैगनीशियम कमी, मांसपेशिहरु मा निद्रामा बाधा, थकान शरीर, दुखाइ सँगसँगै;
- तीव्र शारीरिक गतिविधि (खेल)।
छोराछोरीको डाक्टर को तीव्र वृद्धि पनि यस दबाइ सल्लाह दिन्छन् सक्छ।
सुनिंनु, belching, पखाला: स्वागत समयमा सम्भव साइड इफेक्ट हो।
तपाईं म्याग्नेसियम कार्रोप्नेट र रोग "phenylketonuria" को उपस्थिति मा संवेदनशील छन् भने दबाइ contraindicated छ।
म्याग्नेसियम समावेश औषधीय तयारी, म्याग्नेसियम सल्फेट लागू हुन्छ।
म्याग्नेसियम सल्फेट अर्को नाम हो - मैग्नीशिया (तीतो नुन)। यो शरीरमा प्रभाव अंतर रहन्थ्यो छ। जब तपाईं मा धन प्राप्त गरिबी अवशोषित। यो एक रेचक औषधि र choleretic एजेन्ट रूपमा कार्य। जब parenterally प्रबन्ध म्याग्नेसियम सल्फेट को स्नायु प्रणालीमा शान्त प्रभाव अवलोकन। यस औषधिको खुराक आधारमा हाइपनोटिक, बेहोशि औषधि र soporific प्रभाव छ।
कुल म्याग्नेसियम सल्फेट सूथिंग प्रभाव रक्तचाप मा एक कमी गर्न जान्छ। विशेष गरी उच्चारण उच्च रक्तचाप संग विरामीहरु मा प्रभाव छ। घट्दै दबाव संग एनजाइना को लक्षण कम हुन सक्छ। जबकि त्यहाँ urination वृद्धि छ लागूपदार्थ, को अन्तस्करणले द्वारा उत्सर्जित छ।
को एजेन्ट पाउडर फारममा उत्पादन गर्न सकिन्छ। शरीर मा रही, यो पानी आकर्षित गर्छ। विभिन्न पदार्थ को अवशोषण को प्रक्रिया धेरै सुस्त छ वा पूर्ण रोक्छ। आंतों सामग्रीहरू पतला र विस्तार। म्याग्नेसियम सल्फेट को जठरांत्रिय पर्चा को कम सुनिंनु परिणामस्वरूप, को पेट पर्खाल पानी अवशोषित। यो उपकरण जडानमा विरोधी भडकाऊ exerting सक्षम छ, दुखाइ कम गर्छ, आंत्र patency, bile प्रवाह सुधार गर्छ। साथै, दबाइ विषाक्त पदार्थ र लागूऔषधको द्वारा विषाक्तता रोक्छ।
म्याग्नेसियम सल्फेट एक क्रमबद्घ र लामो समयसम्म प्रयोग कम रक्तचाप हुन सक्छ। त्यसैले, अत्यधिक सावधानी कम रक्तचाप मानिसहरूलाई लागू गर्नुपर्छ। संग म्याग्नेसियम सल्फेट निर्जलीकरण, पटक-पटक र लामो समयसम्म पखाला पछि उत्पन्न हुन सक्छ जो contraindicated मानाङ्कन।
तयारी "मैगनीशियम कार्रोप्नेट" र "मैगनीशियम सल्फेट" मात्र निर्धारण मा लिन।
तेल भिसेल - प्रयोग र लाभ
"Klimaktoplan" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
Dianthus deltoides - औषधीय गुण संग बोट
दबाइ "nifuroxazide"। निर्देशन
मानिसहरू लागि गर्भ निरोधक चक्की। कार्य मा लैङ्गिक समानता?
एक समीक्षा र सल्लाह: TV को लागि ध्वनि। टिभी लागि वक्ता कसरी चयन गर्ने?
प्रोटिनको के हो र जब शरीर यसलाई विशेष गरी आवश्यक छ?
हाइड्रोजन बन्धन के हो? प्रभाव प्रकार
प्रसिद्ध चुरोट "हर्जगोभिना flor" र किन तिनीहरूले नाम छन्
Mashnaya ओल्गा - फिल्म सोफिया खेलेका अभिनेत्री "नौसेना Cadets, अगाडि!"। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
एक बच्चाको लागि सनस्क्रीन - सुरक्षित स्वागत Sunbathing
प्रतिमा चित्रकार Andrei Rublev: जीवनी, रचनात्मकता
एक घर पर्म कसरी बनाउने: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
बेइजिङ एक लक्जरी होटल देखि पेशकश दायरा